Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Gerard Pique Iyo Shaqsiyaadkii Ay Sergio Ramos Isku Fiicnaayeen Ee Haddana Xafladii Arooska Ramos Caawa Ka Maqnaaday. - Gool24.Net
Sergio Ramos iyo gacalisadiisa Pilar Rubio ayaa ugu danbayn si rasmi ah isku guursaday kadib markii ay waqti dheer soo wada qaateen isla markaana ay saddex caruur ah isku soo dhaleen.
Sergio Ramos iyo xaaskiisa Pilar Rubio ayaa xafladoodii arooskooda ee caawa ka dhacday magaalada Seville waxay ku marti qaadeen dad gaadhaya 500 qof oo iskugu jiray marti sharaf, qaraabo, xidigo kubbada cagta ah iyo waliba dadka xaflada hogaaminayay.
Laakiin waxaa jira liis dad magac ku leh kubbada cagta Spain oo aan ka soo muuqan xafladii arooska kabtan Sergio Ramos iyo xaaskiisa Pilar Rubio waxaana ku jira kuwo aan markii hore la filayn in ay ka maqnaan doonaan.
Iyada oo aan wararka soo socda idiinku soo gudbin doono liiska dadkii magaca wayn lahaa ee xaflada arooska Sergio Ramos ka soo qayb galay, waxaana marka hore idiin haynaa shaqsiyaadkii xaflada arooska Ramos iyo xaaskiisa Pilar Rubio ka soo xaadiri waayay.
Tusaale ahaan may jirin cid filaysay in Zinedine Zidane iyo xaaskiisa Veronique ay ka maqnaanayaan xaflada arooska kabtan Sergio Ramos laakiin waxa uu Zidane ka mid noqday dadka magac leh ka maqnaaday xaflada arooska Ramos inkasta oo uu kabtankiisa kooxda Madrid yahay.
Sergio Ramos ayaan arooskiisa ku casuumin xidigii ay sagaalka sanadood Madrid waqtiga fiican ku soo wada qaateen ee Cristiano Ronaldo wuxuuna ka mid noqday shaqsiyaadka xaflada laga waayay ee la tabay.
Haddaba halkan kaga bogo shaqsiyaadka magaca leh ee laga dhex waayay xafladii arooska Sergio Ramos iyo goobaha ay fasaxooda ugu raaxaysanayaan.
1-Zinedine Zidane iyo Veronique, waxay fasax ku joogaan Bilbao.
2-Dani Carvajal iyo saaxiibadii Daphne Canizares oo iyaguna seegay xafladii arooska Ramos
3-Gareth Bale oo si joogto ah uga maqnaada cashooyinka kooxdiisa Madrid ayaa isna seegay xaflada arooska Ramos.
4-Gerard Pique iyo xaaskiisa Shakira oo lagu casuumay arooska Ramos oo ka soo xaadiri waayay xafladii lagu marti qaaday.
5-Karim Benzema ay Ramos isku kooxda Madrid yihiin oo ku raaxaysanaya Los Angeles kana maqnaa xafladii arooska Ramos.
6-Mariano Diaz oo isna ay Madrid ka wada tirsan yihiin Ramos ayaan xaflada arooska ka soo muuqan.
7-Iker Casillas iyo xaaskiisa Sara Carbonero oo lagu casuumay arooska Ramos ayaa arimo caafimaadkooda la xidhiidha ku seegay.
8- Luca Zidane oo Real Madrid ka tirsan ayaan ka soo muuqan xaflada kabtankiisa wuxuuna fasax ku qaadanayaa Ibiza.
9- Goolhayaha Madrid ee Thibaut Courtois oo fasax ku qaadanaya Ibiza oo isla dalka spain ah ayaan ka soo muuqan xaflada saaxiibkiisa Ramos.
10-Cristiano Ronaldo ayaan lagu soo casuumin xaflada Arooska Ramos wuxuuna saaxiibadiisa iyo afartiisa caruurta ah fasax kula qaadanayaa dalka Greece.
11-Vinicius Junior oo isna fasixiisa ku qaadanaya Rio de Janeiro ayaan xaflada arooska Ramos ka soo qayb galin.
12- Isco ayaa isna noqday xidig kale oo ay Sergio Ramo isku koox yihiin oo aan xafladiisa arooska ka soo muuqan.